साइबर क्रिमेसनहरूलाई कसरी उनीहरूको अपराधबाट रोक्न र ndash; सेमील्ट विशेषज्ञ
साइबर क्रिमेसनहरूलाई कसरी उनीहरूको अपराधबाट रोक्न र - सेमील्ट विशेषज्ञ
यो गलत भन्न मिल्नेछ कि त्यो प्रविधि र इन्टरनेटले हाम्रो जीवनलाई सजिलो बनाएको छ। एकै समयमा, भाइरसहरू र हैकरहरूको आक्रमणको जोखिम बढेको छ। माइकल ब्राउन, सेल्टल्ट ग्राहक सफलता प्रबन्धक भन्छिन्, दुर्भाग्यवश, उनीहरूको अपराधबाट साइबर हमलावरहरू रोक्न उपायहरू सेट गर्दैनन्। सोशल मिडिया आफ्नो प्रमुख लक्ष्य मध्ये एक हो। उनीहरूले मान्छेलाई लुगा लगाउँछन् र तपाइँका सेकेन्ड भित्रका व्यक्तिगत जानकारी र फाईलहरू अपहरण गर्न प्रयास गर्छन्। ठूला कम्पनीहरू र विभिन्न सर्वेक्षण रिपोर्टहरूले देखाएको छ कि हैकरहरूले ठूलो संख्यामा सोशल मिडिया प्रयोगकर्ताहरूलाई आक्रमण गर्छन्। तिनीहरूले फेसबुक विज्ञापनहरूमा तपाईंलाई आकर्षित गर्छन् र चहचहाना प्रयोगकर्ताहरूलाई लुकाउने प्रयास गर्छन्।
मालवेयर के हो?
मालवेयर विशिष्ट प्रकारको दुर्भावनापूर्ण प्रोग्राम वा लिपि हो जुन तपाइँको कम्प्युटर वा मोबाइल यन्त्रलाई हानिकारक हुन सक्छ र सम्भवतः तपाइँका सम्पूर्ण फाइलहरू संक्रमित गर्दछ। सामाजिक सञ्जाल मालवेयरले गर्दा तपाईंको सामाजिक मिडिया प्रोफाईल सम्झौता गरिसकेपछि हुन्छ, र तपाइँ आफ्नो आईडीहरूको पहुँच गुमाउनु हुन्छ। जब फायरफक्स प्रयोगकर्ताले मालवेयरद्वारा प्रभावित हुन्छ, उसले तुरुन्त अर्को ब्राउजर स्थापना गर्नुपर्छ।
हालैका महिनाहरूमा, ट्रोजनको आक्रमणले धेरै सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताहरूलाई संक्रमित गरेको छ। तिनीहरूले तपाईंको ईतिहास, प्रयोगकर्ता नामहरू र पासवर्डहरू ट्र्याक गर्छन्, र तपाईंलाई मैलवेयर वा भाइरस समावेश गर्ने लिङ्कहरूमा क्लिक गर्न।
तपाईंको पासवर्ड परिवर्तन गर्नुहोस् नियमित रूपमा
सबै भन्दा पहिले, तपाईंले आफ्नो पासवर्ड जाँच र सुरक्षित गर्नुपर्छ। निश्चित गर्नुहोस् कि तपाइँ बलियो पासवर्ड प्रयोग गर्नुहुन्छ र नियमित आधारमा यसलाई परिवर्तन गर्नुहोस्। Source - небольшой фургон.सुरक्षित पासवर्ड हो जसले ठूलो अक्षर, सानो अक्षर, र शब्दहरूको मिश्रण समावेश गर्दछ। यसमा केही संख्याहरू पनि समावेश गर्नुपर्छ र अनुमान लगाउन असम्भव हुनुपर्छ। हप्तामा एक पटक तपाईंको पासवर्ड परिवर्तन गर्न विचार गर्नुहोस् ताकि तपाईं आफ्नो अनलाइन सुरक्षा र सुरक्षाको आश्वासन पाउन सक्नुहुनेछ।
तपाईं क्लिक गर्नु अघि दुई पटक सोच्नुहोस्
सबै भन्दा दुर्भाग्यपूर्ण चीजहरूमध्ये एक मानिसहरू पप-अप विज्ञापनहरू फिसलिरहेका हुन्छन् र ठूलो संख्यामा लिङ्कहरूमा क्लिक गर्नुहोस्। इन्टरनेट प्रयोग गर्दा, तपाईले अज्ञात लिङ्कहरूमा क्लिक गर्नु हुँदैन किनभने तिनीहरू मेलवेयर र भाइरस समावेश हुन सक्छन्। साथै, सम्भावनाहरू छन् कि तपाईको व्यक्तिगत सोशल मिडिया खाताहरू सम्झौता गरिनेछ किनभने मालवेयर तपाईको प्रणालीमा फैलिनेछन्, तपाईंको अधिकांश फाईलहरु लाई संक्रमित गर्दछ। यो सही छ कि हैकरहरूको लागि तपाईंलाई ठिक पार्न धेरै विचारहरू छन्। यो तपाईं कसरी इन्टरनेटमा कसरी सुरक्षित रहनु हुन्छ? हामी दृढतापूर्वक अनुशंसा गर्छौं कि तपाई अज्ञात लिङ्कहरूमा क्लिक गर्नुहुन्न वा कुनै पनि मूल्यमा विज्ञापनहरू पप गर्नुहोस्। एकपटक तिनीहरू देखा पर्दा, तपाइँले तपाइँको कम्प्युटरलाई सकेसम्म चाँडै सन्झ्याल बन्द गर्नुपर्छ वा पुनः सुरु गर्नुपर्दछ।
ओवररिंगिंग देखि बचें
धेरै व्यक्तिले साझा गर्ने अर्थ भनेको हेरचाह गर्नु हो। यो एक हदसम्म विश्वासी हो, तर इन्टरनेटमा साझेदारी गर्दा गम्भीर समस्याहरू हुन सक्छ। तपाईंको सामाजिक मिडिया प्रोफाईलहरू प्रयोग गर्दा, तपाईंले साझेदारी र निरीक्षण गर्नबाट जोगिनै पर्छ। त्यहाँ एकै कुरा फेरि साझेदारी गर्न आवश्यक छैन। यो हैकर र मालवेयर द्वारा हमला गर्न को संभावनाहरु लाई बढा सकते हो।
एक आभासी निजी नेटवर्क को उपयोग गर्नुहोस
एन्टिभाइरेस कार्यक्रमहरूसँग जोड्दा भर्चुअल निजी सञ्जालले तपाइँको यन्त्रलाई सुरक्षा गर्न सक्दछ। यही कारणले तपाइँ सधै ती कार्यक्रमहरू प्रयोग गर्नका लागि तपाइँलाई अनलाइन सुरक्षा सुनिश्चित गर्नै पर्छ। तपाईको आईपी ठेगाना ह्याकरहरूले तपाईंको विवरण पत्ता लगाउनेछन्। तपाईंले आफ्नो आईपी लुकाउन र इन्टरनेटमा बेनामीको रूपमा जडान गर्नु पर्छ किनभने यसले मालवेयर र भाइरसद्वारा आक्रमणको संभावना घटाउन सक्छ। वीपीएन सेवाहरूको ठूलो संख्या इन्टरनेटमा उपलब्ध छ।
एक्सप्रेस वीपीएन सर्वोत्तम सम्झौता मध्ये एक हो; यसले तपाईंको अनलाइन सुरक्षा सुनिश्चित गर्दछ र मालवेयरले तपाईंको प्रणालीलाई संक्रमण गर्न अनुमति दिन्छ। अन्य महान सौदों IPVanish, कैक्टस वीपीएन, लुकाउनुहोस Myyss, र NordVPN।